Echiche mygha nke Apollo | Njem zuru oke
Otu akụkọ ifo kachasị dị egwu n'oge gboo bụ nke Apollo, nke bụ maka chi onye agha nke bụ onye omenkà n'otu oge n'ihi na ya na muses na-esonyere ya ma bụrụkwa onye na-agbachitere abụ na egwu. Ọ bụ otu n'ime chi ndị a kacha asọpụrụ na Gris oge ochie na otu n'ime ọtụtụ vasatail.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na akụkọ ifo ndị Greek, ị gaghị echefu post na-esonụ ebe anyị ga-ajụ maka ọnụ ọgụgụ Phoebus (dịka ndị Rom maara chi a), mkpa akụkọ ifo ndị Apollo, mmalite ya, ọrụ ya na ezinụlọ ya, n'okwu ndị ọzọ.
1 Onye bụ Apollo?
2 Olee otu Apollo si anọchite anya ya?
3 Onyinye bu onyinye nke chi Apollo?
3.1 Apollo na clairvoyance
3.2 Apollo na agwa
3.3 Apollo na Trojan Agha
4 Ezinụlọ Apollo
Onye bụ Apollo?
Site na akụkọ ifo ndị Greek, Apollo bụ nwa Zeus, chi kachasị ike nke Olympus, na Leto, ada nke titan onye efe chi chi nke abali na nke ehihie.
Zeus nwere mmasị na Asteria, onye bụ nwanne nwanyị Leto, wee nwaa ijide ya n'ike. Agbanyeghị, ọ gbara ọsọ gbapụ wee ghọọ nnụnụ kwel mana ka chi a gara n'ihu na-enye ya nsogbu, ọ mechara tụba onwe ya n'ime oké osimiri wee bụrụ agwaetiti Ortigia.
N’abughi ebum n’uche ya, Zeus lekwasịrị anya na Leto bụ onye weghachiri na site na mmekọrịta ahụ tụụrụ ime Apollo na ejima ya Artemis. Agbanyeghị, nwunye ziri ezi nke Zeus, Hera, mgbe ọ nụrụ banyere njem di ya, malitere mkpagbu jọgburu onwe ya megide Leto ruo n'ókè nke na ọ chọrọ enyemaka nke nwa ya nwanyị bụ Eileithyia, chi nwanyị ọmụmụ, iji gbochie ọmụmụ nke titanid.
Ọ bụ nke a kpatara na n'akụkọ ifo, Leto nọrọ n'oké ihe mgbu ruo ụbọchị itoolu mana ekele aka nke ụfọdụ chi ndị mere ebere na Leto, ekwere ka ọmụmụ Atemis me ngwa ngwa bụrụ okenye maka nne ya. site na nnyefe nwanne ya nwoke bụ Apollo. Ma ọ mere. Otú ọ dị, ahụhụ nne ya nwere masịrị Artemis nke na o kpebiri ịnọgide na-amaghị nwoke ruo mgbe ebighị ebi.
Ma ihe ahụ merenụ akwụsịghị n’ebe ahụ. N’adabeghị ebum n’uche ya, Hera gbalịrị ọzọ ka ọ gbuo Leto na ụmụ ya site n’iziga piti iji gbuo ha. Ọzọkwa, chi nwere ọmịiko na akara aka Leto ma mee ka Apollo tolite n'ime ụbọchị anọ iji jiri puku puku akụ gbuo anụ ọjọọ.
Ebe ọ bụ na agwọ ahụ bụ anụmanụ Chukwu, Apollo mere penance maka igbu ya na ebe eke dara, e wuru Oracle nke Delphi. Nwa nwoke Zeus ghọrọ onye nchebe nke ebe a, iji mezuo amụma ahụ na ntị nke ndị na-agba afa ma ọ bụ pythias.
Ma iro Hera na Leto akwụsịghị ebe a kama akụkọ ifo nke Apollo na-akọ na ma Atemis ma na ya ga-anọgide na-abụ nne na-echebe nne ha ruo mgbe ebighị ebi, ebe Hera akwụsịghị inye ya ahụhụ. Dị ka ihe atụ, dị ka akụkọ ifo ndị Gris si kwuo, ụmụ ejima ahụ gburu ụmụ ndị 14 nke Níobe, ndị na-akwa emo titan na-enweghị isi, na onye ukwu bụ Titius, onye chọrọ ịmanye ya.
Olee otu Apollo si anọchite anya ya?
Ndị ọzọ chi na-atụ ya egwu naanị nne na nna ya nwere ike ijide ya. A na-egosipụta ya dị ka nwa okorobịa mara mma, nke na-enweghị afụ ọnụ nke ejiri ahịhịa laurel chọọ isi ya mma na nke ọ na-ejide ma ọ bụ ngwa egwu nke Hamis nyere ya. site n’arịrịọ mgbaghara maka izuru otu anụ ụlọ Apollo. Mgbe ọ malitere ịkpọ ụbọ akwara, ọ tụrụ nwa Zeus n'anya ịbụ onye nwere mmasị na egwu wee bụrụ ezigbo ndị enyi.
Apollo na-anọchitekwa ịnya ụgbọ ịnyịnya ọla edo nke Sun na ịnyịnya anọ dị ebube na-adọta ịgafe elu igwe. N'ihi nke a, a na-ahụta ya dị ka chi nke ìhè, Helios bụ chi nke Anyanwụ. Kaosinadị, n'oge ụfọdụ akụkọ ihe mere eme a mata chi abụọ ahụ n'otu, Apollo.
Onyinye bu onyinye nke chi Apollo?
A na-akọwakarị Apollo dị ka chi nke nkà, egwu, na uri.
Ọzọkwa egwuregwu, ụta na akụ.
Ọ bụ chi nke ọnwụ mberede, ọrịa na ihe otiti kamakwa ọ bụ chi nke ọgwụgwọ na nchebe megide ike ọjọọ.
Emere Apollo site na ìhè nke eziokwu, ebumnuche, izu oke na nkwekọ.
Ọ bụ onye nchebe nke ndị ọzụzụ atụrụ na atụrụ, ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na ndị na-agba ụta.
Apollo na clairvoyance
Dabere na akụkọ ifo nke Apollo, chi a nwere ikike inyefe ndị ọzọ onyinye nke ịkọ ọdịmma na nke a bụ ihe metụtara Cassandra, onye ụkọchukwu ya na ada nke Priam King of Troy, onye o nyere onyinye nke amụma n'ọnọdụ otu zutere anụ ahụ. Agbanyeghị, mgbe ọ nabatara ngalaba a, nwa agbọghọ ahụ jụrụ ịhụnanya nke chi na ya, na-enwe obi amamịghe, kọchaa ya, na-eme ka onye ọ bụla ghara ikwenye amụma ya.
Ọ bụ ya mere na mgbe Cassandra chọrọ ịdọ aka ná ntị banyere ọdịda Troy, e jighị amụma ya kpọrọ ihe ma bibie obodo ahụ.
Apollo na agwa
Dabere na akụkọ mgbe ochie, Apollo nwekwara onyinye ịba ụba, na-ekpughere ụmụ mmadụ ihe akara aka na okwu ya na Delphi (ebe o gburu agwọ Python) dị ezigbo mkpa na Gris niile. Oracle nke Delphi dị na etiti okpukpe na ụkwụ Ugwu Parnassus na ndị Gris gara n'ụlọ nsọ nke chi Apollo iji mụta banyere ọdịnihu ya n'ọnụ Pythia, onye ụkọchukwu na-agwa chi a okwu.
Apollo na Trojan Agha
Akụkọ ifo nke Apollo na-agwa Poseidon, bụ chi nke oke osimiri, zitere ya ka ọ wuo mgbidi gburugburu Troy iji chebe ya pụọ ​​n'aka ndị iro. Mgbe eze Troy na-achọghị ịkwụ ụgwọ nke chi, Apollo gbara mbọ site na iziga ihe otiti na-egbu mmadụ n'obodo ahụ.
Ka oge na-aga, Apollo tinyere ọnụ na Trojan War n'agbanyeghị na na mbido Zeus rịọrọ chi dị ka nnọpụiche n'agha ahụ. Agbanyeghị, ha mechara sonye na ya. Iji maa atụ, Apollo na Aphrodite mere ka Ares kwenye ịlụ ọgụ na Trojan ebe ụmụ abụọ nke ụmụ Apollo, Hector na Troilus, so na Trojan.
Ọzọkwa, Apollo nyeere Paris aka igbu Achilles, ebe ọ bụ ya duziri akụ nke nwa eze Trojan gaa naanị otu adịghị ike nke dike Greek: ikiri ụkwụ ya. Ọ zọpụtakwa Aeneas n'aka ọnwụ n'aka Diomedes.
Apollo nwere ọtụtụ, ọtụtụ ndị mmekọ na ụmụaka. Bụ chi nke ịma mma o nwere ma ndị nwoke ma ndị nwanyị ndị hụrụ n'anya.
Ndị nwoke hụrụ ya n'anya bụ:
N'aka nke ọzọ, o nwere ọtụtụ ndị nwunye ya na ya mụrụ ụmụ.
Ya na Muse Talía o nwere Coribantes
Mụ na Dríope gaa Anfiso
Na Creusa ka ọ muru Ion
Ya na onye obula o nwere Militọs
Mụ na Coronis na Asclepius
Na nymph Cyrene muru Areisteo
Ya na Ftía tụụrụ ime Doro
Ya na Qione nwere Filamón
Ya na Psámate mụụrụ Lino
omenalaakụkọ ihe mere eme
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Mygha Apollo